सिल्टल: पाइजोनको स्क्रैप वेबसाइटहरू प्रयोग गर्दै
वेब स्क्रैपिंग पनि वेब डेटा निकासी को रूप मा परिभाषित गरिएको छ वेबबाट डाटा प्राप्त गर्न को लागी प्रक्रिया र डेटा प्रयोग गर्न ढाँचामा निर्यात गर्नुहोस्. अधिकतर अवस्थामा, यस प्रविधिले वेबमास्टर्सद्वारा प्रयोग गरी वेब पेजहरूबाट बहुमूल्य डेटा बहुमूल्य डेटा निकाल्न, जहाँ स्क्रैप गरिएको डाटा Microsoft एक्सेल वा स्थानीय फाइलमा सुरक्षित गरिएको छ।.
कैसे पायथन संग एक वेबसाइट को स्क्रैप गर्न को लागि
शुरुवात को लागि, पाइजोन सामान्यतया प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषाहरु मध्ये एक हो जसको अत्यधिक कोड पढाने योग्यता मा जोर देती छ. हाल, पाइजोन Python2र Python3को रूपमा चलिरहेको छ. यो प्रोग्रामिंग भाषा स्वचालित मेमोरी प्रबंधन र डायनामिक प्रकार प्रणाली को सुविधा गर्दछ - laptop repair morgan hill. अब, पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा समुदायमा आधारित विकास पनि गर्दछ.
लगइन गर्नु पर्ने गतिशील वेबसाइटहरु बाट डेटा धेरै वेबमास्टरहरूको लागि एक महत्वपूर्ण चुनौती भएको छ. यो स्क्रैपिंग ट्यूटोरियलमा, तपाईंले सिकाउनुहुनेछ एउटा साइट स्क्रैप गर्ने कि पाइजोन प्रयोग गरेर लगइन प्रमाणीकरण आवश्यक पर्दछ।. यहाँ एक चरण-दर-चरण गाइड हो जुन तपाईंलाई स्क्रैपिंग प्रक्रिया कुशलतापूर्वक पूरा गर्न सक्षम हुनेछ.
चरण 1: लक्ष्य-वेबसाइट अध्ययन गर्दै
गतिशील वेबसाइटहरूबाट डाटा निकाल्नको लागी लगइन प्राधिकरण चाहिन्छ, तपाइँ आवश्यक विवरणहरू व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।.
सुरू गर्न, "प्रयोगकर्ता नाम" मा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र "तत्व को निरीक्षण" विकल्पमा चयन गर्नुहोस्. "प्रयोगकर्ता नाम" कुञ्जी हुनेछ.
"पासवर्ड" प्रतिमामा दाँया क्लिक गर्नुहोस् र "तत्वलाई निरीक्षण गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस्।.
पृष्ठ स्रोत अन्तर्गत "authentication_token" खोज्नुहोस्. तपाईंको लुकेको इनपुट ट्याग तपाईंको मान हुन दिनुहोस्. यद्यपि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि विभिन्न वेबसाइटहरू फरक लुकेको इनपुट ट्यागहरू प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ.
केहि वेबसाइटहरू सरल लग इन फारम प्रयोग गर्छन् जबकि अन्य जटिल फारामहरू लिन्छन्. यदि तपाईँ जटिल संरचनाहरू प्रयोग गर्ने स्थिर साइटहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको ब्राउजरको अनुरोध लग जाँच गर्नुहोस् र वेबसाइटमा लग गर्न लगिन महत्त्वपूर्ण मानहरू र कुञ्जीहरू चिन्ह लगाउनुहोस्।.
चरण 2: तपाईंको साइट मा लगिन प्रदर्शन
यस चरण मा, सत्र ऑब्जेक्ट बनाएँ जुन तपाईंलाई सबै अनुरोधों को अनुसार लगइन सत्र मा ले जाने को अनुमति दिनेछ।. विचार गर्न दोस्रो कुरा तपाईंको लक्षित वेब पेजबाट "सीएसएफएफ टोकन" निकाल्दै छ. लगइन लगइनको समयमा तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ. यस अवस्थामा, टोकन पुन: प्राप्त गर्न XPath र lxml प्रयोग गर्नुहोस्. लगइन यूआरएलमा अनुरोध पठाउन एक लगइन चरण प्रदर्शन गर्नुहोस्.
चरण 3: स्क्रैपिंग डेटा
अब तपाईं आफ्नो लक्षित साइट बाट डेटा निकाल्न सक्नुहुन्छ. तपाईको लक्ष्य तत्व पहिचान गर्न र परिणामहरू उत्पादन गर्न XPath प्रयोग गर्नुहोस्. तपाईंको नतिजा प्रमाणित गर्न, आउटपुट स्थिति कोड फारम प्रत्येक अनुरोध नतिजा जाँच गर्नुहोस्. तथापि, नतिजा प्रमाणित गर्दै तपाईंलाई सूचित गर्दैन कि लगइन चरण सफल भयो तर संकेतकको रूपमा कार्य गर्दछ.
विशेषज्ञहरु लाई स्क्रैपिंग को लागि, यो ध्यान दिनुहोस कि XPath मूल्यांकन को फिर्ती मान भिन्न छ. परिणाम अन्त प्रयोगकर्ता द्वारा संचालित XPath अभिव्यक्तिमा आधारित छ. XPath मा नियमित अभिव्यक्ति प्रयोग गरी XPath अभिव्यक्तिहरू सिर्जना गर्नाले तपाइँलाई साइटहरू बाट डाटा निकाल्न मद्दत पुर्याउँदछ जुन लगइन प्राधिकरणको आवश्यकता पर्दछ।.
पाइजोनसँग, तपाईंलाई अनुकूल ब्याक अप योजना आवश्यक छैन वा हार्ड डिस्क दुर्घटनाग्रस्त बारेमा चिन्ता. पायथनले स्थिर र गतिशील साइटहरूको डेटालाई पहुँच गर्न लगइन प्रमाणीकरणको आवश्यकतालाई कुशलतापूर्वक डेटा निकाल्छ. तपाईंको कम्प्युटरमा पाइडोन संस्करण स्थापना गरेर अर्को स्तरमा तपाइँको (4 9) वेब स्क्रैपिंग अनुभव लिनुहोस्.